Iqiniso Mayelana namahemuhemu ahlobene noPewdiepie Shadowbanned | XperimentalHamid
Iqiniso Mayelana namahemuhemu ahlobene noPewdiepie Shadowbanned
October 23, 2020 by I-Javeria Dinar
Uma ungumuntu oshisekela ngokweqile i-Youtube lapho-ke kungenzeka ukuthi usuyayazi inkanyezi yomqambi wokuqukethwe we-Youtube uFelix Kjellberg. Uma ungazi vele nguyena ovelele phakathi kwezigidi zamaYoutubers (abakhiqizi bokuqukethwe).
Izindaba ezithinta kakhulu, ikakhulukazi abalandeli bakhe, zimayelana nesiteshi sakhe iPewdiepie Shadowbanned nemibiko yenkinga exakile ngesiteshi.
Imizamo yababukeli abasesha iPerDiePie yehlulekile ku-Youtube, vele isiteshi sakhe ngeke sivele. Amavidiyo emiphumeleni ephezulu nawo athambekele ekubeni ngonyaka owedlule noma ngaphezulu.
Ekugcineni, uKjellberg uzithumele kuthebhu yomphakathi yesiteshi sakhe. Uphawule ukuthi ividiyo yakhe yakamuva kubonakala ukuthi ibingayi emabhokisini amancane abantu. UKjellberg akazange asibuyise isicelo sokuphawula.
Ngabe uPewdiepie Shadowbanned real?
I-YouTube izisingathe kanjani izikhalazo?
Amahlebezi aqala ukusabalala ezinkundleni zokuxhumana ukuthi isiteshi sikaFelix Kjellberg sePewDiePie sivinjwe yipulatifomu yokusakaza.
I-Shadowbanned ichazwa ngokuthi "isenzo sokuvimba noma sokuvimba kancane umsebenzisi noma okuqukethwe kwakhe emphakathini we-inthanethi ukuze kungabonakali kalula kumsebenzisi ukuthi uvinjelwe."
Ukukubeka kafushane nje, abalandeli bakaPewDiePie nababhalisile babelane ezinkundleni zokuxhumana ukuthi bazofuna isiteshi sakhe emsamo futhi bangayitholi imininingwane abebengayilindela.
Omunye umsebenzisi wabelane ngevidiyo ye-screengrab yalokho okwenzekile ngenkathi bezama ukuthola iPewDiePie ku-YouTube futhi wabhala, “Kungani isiteshi sika @ pewdiepie singaveli @YouTube? Iziteshi zawo wonke umuntu zikhona. Ukuzama ukumsusa lol? ”
Esikhathini esithile, lezi zimangalo ziqala ukuthrendela ku-Twitter nabantu bebuza ukuthi kwenzekani nge-akhawunti yakhe. Abanye bathi bazofuna i-YouTuber epulatifomu futhi kuzovela amavidiyo amadala kakhulu - akukho okuqukethwe kwakhe okusha.
Yize ebesanda kufaka ividiyo emahoreni ambalwa edlule, abalandeli bebelwela ukuyithola, abalandeli bethi abakaze baziswe ukuthi iyenyuka.
Abalandeli ku-Twitter badidekile futhi abakholwa ukuthi leli yicala langempela lokuvinjelwa yi-Youtube. Njengoba kunikezwe umsakazi osanda kusayina isivumelwano esikhulu ne-YouTube, kungabonakala kungajwayelekile ukuthi inkampani ikhawulele ukufinyelela kwakhe ngenhloso.
NgoMeyi 2020, uPewDiePie wasayina isivumelwano sokusakaza bukhoma esikhethekile ne-YouTube. Ngababhalisile bakhe abacishe babe yizigidi eziyi-154 ku-YouTube, unokubhaliselwe okungokwesibili kunanoma yisiphi esinye isiteshi lapho.
Konke lokhu yikho okwamenza waba nengqophamlando — ngakho kungani i-YouTube izama ukonakalisa leso sivumelwano kanye nokubukwa kukaPewDiePie “ngezigidi ezingama-25 kuze kube manje” njengesinye seziteshi ze-YouTube ezinkulu kunazo zonke ezisetshenziswa emlandweni?
ITeamYouTube kuTwitter, i-akhawunti esemthethweni yenkampani enikeza izibuyekezo nezimpendulo ezivela enkampanini, ibhekise la mahemuhemu nokukhathazeka ngokunyamalala kukaPewDiePie.
"I-YouTube ayizifihli iziteshi," kusho inkampani ku-tweet. "Kungenzeka ukuthi ividiyo imakwe yizinhlelo zethu njengezingahle zephule futhi idinga ukubuyekezwa kuqala ngaphambi kokuthi ivele lapho iseshwa, njll. Qaphela ukuthi ukubuyekezwa kuthatha isikhathi eside njengoba sinamaqembu alinganiselwe ngenxa ye-COVID-19."
Ngokusho kwePolygon, bakwazile nokubona kuphela amavidiyo amadala kaPewDiePie, udaba i-YouTube ebhekele bona.
"Inkampani itshele abezindaba ze-We Wearing imibiko ukuthi isiteshi sikaPewDiePie namanye ama-video akuveli lapho kuseshwa," kusho le nkampani encwadini. “Kumanje sisebenzela ukulungisa lolu daba. Siyaxolisa nganoma yikuphi ukuphazamiseka okubangelwe yilokhu. ”
ngiyethemba uyayithanda le Thumela Mayelana ne-PewDiePie, ngakho-ke nawe Ungafunda ngakho Uhlelo lokusebenza lwe-YouTube Shorts
Ngalesi sikhathi, ukusesha kwethu kukhombisa ukuthi ukubheka phezulu i- "PewDiePie" ku-YouTube kuzoveza isiteshi sakhe, kanye namavidiyo akhe akamuva kakhulu. Kubukeka sengathi abalandeli akudingeki bakhathazeke kakhulu nge-shadowban ngalesi sikhathi.
Izigaba Ezokuzijabulisa, FYI, Izindaba, inoveli Amathegi UPewdiepie Uvinjelwe Ku-Youtube, Kungani iPewdiePie Shadowbanned Imeyili kwemikhumbi
Isahluko 1701-1702 seRevelnd Insanity Novel
Tiktok Shower Head Kanye #Showerhead
Joyina abanye ababhalisile abangu-25,093